ललितपुरमा निर्वाचन जितेका काँग्रेस सासंद मन्त्री बन्छन् « Lalitpur Khabar
ललितपुरमा निर्वाचन जितेका काँग्रेस सासंद मन्त्री बन्छन्
नेपाली काँग्रेस, ललितपुर
रामकृष्ण चित्रकार, नेपाली काँग्रेस ललितपुरका नेता हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमा उदाएका रामकृष्ण पहिलो संविधानसभामा संविधानमा मुद्दाहरुमा सक्रिय सहभागीता जनाएर चर्चामा थिए । काँग्रेस महाधिवेशनमा ललितपुरको जिल्ला सभापतिको दावी प्रस्तुत गर्ने सुरसार कसेका चित्रकार ललितपुरको भूगोलसँगै यहाँको जनजीवनसँग राम्रो परिचित छन् । उनै ललितपुरका चिर परिचित नेता चित्रकारसँग काँग्रेस महाधिवेशनको सन्र्दभमा ललितपुर खबर प्रतिनिधिले गरेको भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंश :
ललितपुर काँग्रेसको महाधिवेशनको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीको विशिष्ट अवस्थामा डेढ वर्ष ढिलो गरेर हामी महाधिवेशन गर्दैछौं । यो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषय सबैभन्दा बढि सरोकार हुने विषय हो ।
आन्दोलनमा खारिएर आएका साथीहरु नेतृत्वको चाहना गरेर प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो आफैमा सकारात्मक विषय हो । म आफै पनि १३ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी छोडेर साथीहरुका लागि त्याग गरेको थिए । अहिले धेरै साथीहरुको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु ।
पछिल्लो समय नेतृत्वका लागि आकाक्षीहरुको दावीपछि ललितपुरमा कडा प्रतिश्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रतिपर्धाका बीच आफूलाई कस्तो अवस्थामा पाउनु भएको छ ?
वडा अधिवेशनमा जसरी नेतृत्व चुनिएको छ । अधिकतम साथीहरुको सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व निर्माण भएको छ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु जसरी आउनु भएको छ । त्यो देखेर म उत्साहित छु । सिंगो पाटी संगठनले मलाई खोजिरहेको छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
राजनीतिमा अपराधिकरणको प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दो छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न कस्ता योजना ल्याउनु हुन्छ ?
सिद्धान्त र आर्दशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विचारको राजनीति गर्ने पार्टी बनाउन म काम गर्नेछु । काँग्रसलाई शुद्धिकरण र सुदृढिकरणगर्न अत्यन्त आवश्यक छ । विचारको राजनीति,आदर्शको राजनीति,मूल्यको राजनीति र नैेतिकताको राजनीति स्थापित गर्न मेरो मूमिका हुनेछ ।
शहर,काँठ र पहाड भूगोलमा विभाजित ललितपुरको विकाशका लागि तपाईको योजना कस्तो छ ?
मैले ललितपुरलाई राम्ररी बुझेको छु । काँठ र दक्षिण ललितपुरको संगठन निर्माणका लागि धेरै मेहनत गरेको छु । विद्यार्थी संघमा रहँदा दक्षिण ललितपुर र काँठ क्षेत्रमा दक्षिण ललितपुरमा संगठन निर्माण गर्न अहोरात्र खटिएको छु । दक्षिण ललितपुरको देविचौर,घुसेल, माल्टा,प्युटार,आश्राङ,गिम्दी, ठुलादुलुङ,कालेश्वर, बुखेल,मानिखेल,गोटिखेल,इकुडोललगायत क्षेत्र घुमेको छु । यस क्षेत्रमा बाटो पुगेको छ र तर राम्रो हुन सकेको छैन ।
ललितपुर भनेको शहरलाई बुझ्ने गरिएको छ । दक्षिण ललितपुरको पहाडि भेगको विकाश अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यस ठाँउमा लगानी गर्नु पर्ने जरुरी छ । मैले शहरमा जम्दा जम्दै पनि मैले दक्षिण ललितपुरमा धेरै काम गरेको छु ।
समृद्ध ललितपुरको विकाशसँग मसँग कार्ययोजना छ । जनताको चुलो चौकामा परिवर्तन देख्न जरुरी छ ।
हिजोको दिनमा ललितपुरमा भएको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा विवाद पनि देखिए तपाई नेतृत्वमा आउनु भए के गर्नुहुन्छ ?
निर्वाचनमा जित्नका लागि टिकट वितरण गछौं। त्यो महत्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ । हिजोको निर्वाचनमा कमी कमजोरीका कारण कतिपय ठाँउमा हामीले घाटा व्यहोरेका छौं । त्यो कमी कमजोरी हुन दिने छैन । मुल्याङकनका आधारमा, जित्ने आधारमा,योगदानको आधारमा, जनताको पक्षमा काम गरेको आधारमा सक्षम उम्मेदवार जनताले खोजेको आधारमा ललितपुरमा सम्बोधन हुनेछ । त्यो काम हुनेछ ।
ललितपुरमा निर्वाचन जितेको ठाँउमा जनप्रतिनिधिहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि ?
हामीले जितेको कतिपय ठाँउमा बोर्डमा बहुमत छैन । त्यस ठाँउमा हामीले जनताको पक्षमा नीति कार्यक्रम बनाउन सकिरहेको छैन । ललितपुर महानगरमा असार ३१ गते राती २ बजे मात्रै बजेट पारित भयो ।गोदावरी नगर र वागमती गाँउपालिका उत्कृष्ट काम भइरहेको छ । सापेक्षित रुपमा नेपाली काँग्रेसले राम्रो काम गरिरहेको भन्ने छ । तर महाकाल, कोञ्ज्योसोम र महालक्ष्मी नगरमा जनताको धेरै गुनासो सुनेका छौं ।
ललितपुर काँग्रेस नेतृत्वमा आकाँक्षी धेरै देखिए नि तपाईलाई जित्न सझिलो छ र ?
सबैले नेतृत्वमा आउन अधिकार छ । दुःख गरेर पार्टीमा काम गर्नु भएको छ । हामी स्वस्थ्य रुपमा व्यवस्थापन गर्छौं।
अरु पार्टीबाट आएका नेताहरुलाई हामी सही ठाँउ दिएर व्यवस्थापन गर्छौं।
कतिपय साथीहरुलाई जिल्ला कमिटीमा हामीले ठाँउ दिएका छौं । सबैलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । कार्यविभाजनको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सबैलाई साथीहरुलाई कुनै गुनासो गर्ने ठाँउ दिनु हुदैन ।
संविधानसभा सदस्य रहेर के ललितपुरका जनताको पक्षमा के काम गर्नु भयो र ?
त्यस बेला प्रत्येक सासंदलाई १० लाख बजेटको व्यवस्था थियो । मैले त्यो बजेट सबैतिर समानुपातिक रुपमा वितरण गरेको थिए । संविधानसभामा म न्यायिक समितीमा रहेर काम गर्दा संवैधानिक समितीमा न्याय प्रणालीको स्वतन्त्र बनाउन र राजनीतिकरण हुनु हुदैन भन्ने पक्षमा मैले बोलेको थिए । अस्पतालको बेडमा हुँदा समेत म मतदानमा भाग लिएको थिए ।
ललितपुर काँग्रेसमा तपाईलाई नै विजयी किन बनाउने ?
मैले नेपाली काँग्रेसको संगठनमा धेरै मेहनत गरेको छु । विद्यार्थी संघमा २२ वर्षसम्म धेरै मेहनत गरेको छु । दक्षिण ललितपुरका विद्यार्थी संघको संगठन विस्तारमा काम गरेको छु ।
पार्टीमा पनि निरन्तर काम गरेको छु । पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरेको छु । निकै लामो समयसम्म पार्टीको जिल्ला कमिटीमा काम गरेको छु । युवाहरुलाई संगठित बनाउन, पार्टीलाई विचारको राजनीतिीलाई स्थापित बनाउन काम गरेको छु । सशक्त पार्टी ललितपुरमा स्थापित गर्न मेरो उम्मेदवारी हो ।
ललितपुर काँग्रेसमा विजय प्राप्त गरेपछि के काम गर्ने योजना छ ?
सबैभन्दा पहिले पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षणको जरुरी छ । ७१ वटै वडामा प्रशिक्षण सुरु गर्नेछु । भाषणकला र व्यक्तित्व निमार्ण, कार्यशैली र विचारधारालाई माथि उठाउन यो अभियान तालिम सुरु गर्नेछु ।
पार्टी कार्यालयमा पुस्तकालय निर्माण गर्नेछु । पार्टी कार्यालयमा निरन्तर आउने वातावराण बनाउनेछु । कार्यकर्ताहरुको रेकर्ड राख्ने, मुल्याङ्कनको आधारमा कार्यविधाजन गर्ने पद्दतीको विकाश गर्ने काम गर्नेछु ।
ललितपुरमा मौका मिल्दा बाहिरबाट आएर निर्वाचन लड्ने र अप्ठ्यारोे पर्दा छोडेर अन्तै निर्वाचन लड्न जानेजनप्रतिनिधिहरुको प्रवृति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न ललितपुर काँग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्छ र खेल्नुपर्छ ?
ललितपुर काँग्रेसले २०४८ सालमा मास्टर जुलुम शाक्यलाई ल्याएबाहेक ललितपुरको नेतालाई मात्रै जिल्ला राजनीतिमा अवसर दिएको छ ।
यहाँका जनता अहिले शिक्षत भइसकेका छन् । जिल्ला बाहिरबाट आएर ललितपुरको राजनीति गर्दा यहाँका विकाश हुन सक्दैन । यहाँको आवाज संसदमा घनिभुत रुपमा जान सक्दैन । जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
ललितपुरका जनप्रतिनिधिहरुले मन्त्री बन्ने अवसर कमै
पाउछन् । नेपाली काँग्रेस जिल्ला नेतृत्व निर्वाचन जितेकोे खण्डमा यहाँका जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउन कस्तो भूमिका खेल्छ ?
ललितपुरका जनताले निर्वाचनमा विजयी गराएपछि ती जनप्रतिनिधिले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । २०७० सालमा निर्वाचन जितेपछि अर्थ मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय ललितपुरका जनप्रतिनिधिले पाएका छन् ।
ललितपुरका जनताले जनप्रतिनिधिलाई विजयी नबनाउदा पनि बेनीबहादुर कार्की, बासुदेव कार्की,योगप्रसाद उपाध्याय,ओमकार श्रेष्ठलाई नेपाली काँग्रेसले अवसर दिएको छ । अझ कृष्णप्रसाद भट्टराई ललितपुरकै जनताको छोरो २ पल्ट प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
दशैँ र कोरोना संक्रमण ?
दशैँ भित्रिएसँगै अहिले शहर बजारमा किनेमेल गर्नेको भिड लागेको छ भने काठमाडौं छोड्ने पनि बढ्दै
क्वाँटी र स्वास्थ्य
-डा.अरुणा उप्रेती- मलाई कोभिडको संक्रमण भयो । म शाकाहारी भएकोले मैले क्वाँटी, चना, आलु, कुरिलोको
‘पपजी, फ्रिफायर मात्रै होइन, टिकटकसमेत बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ’
आशाकुमारी विक सासंद, प्रतिनिधि सभा कोरोना संक्रमणपछि लकडाउन भयो । सबै मानिस कोठाभित्र बस्नु
जोन्सन र भेरोसिल खोपबारे जान्नै पर्ने केहि तथ्य
डा. रवीन्द्र पाण्डे अहिले नेपालमा पनि कोरोनाको खोप थालिएको छ । नेपालमा १२ लाख ८१